सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चट्याङ लागेर मंगलबार चार जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीमा दुई र कञ्चनपुरमा दुई जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुन अगाडि नै अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन तत्कालीन प्रधानसेनापतिले पत्र लेखेको दाबी गरेका छन्।
वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा भएको छ। मंगलबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गरी गौतमले पार्टी घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरे सत्याग्रहमा बस्ने डा. केसीको चेतावनी डा. गोविन्द केसीले आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फेरि सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
तीन दिन मनसुन थप सक्रिय हुने, सतर्कता अपनाउन आग्रह जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिन मनसुन थप सक्रिय हुने जनाएको छ।
घूस प्रकरणमा न्यायाधीश कोइरालालाई काम गर्न रोक सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन मोलमोलाइको विवादमा तानिएका जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई कामकाज गर्न रोक लगाइएको छ।
‘अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाइसक्यौं’ नेपाल ‘स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी)’ मा आबद्ध नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको सरकारले जनाएको छ।
विज्ञ भन्छन्- दिसामा पाइने जीवाणु खानेपानीमा मिसिंदा काठमाडौंमा हैजा फैलियो काठमाडौंको खानेपानीमा दिसामा पाइने जीवाणु भेटिएको छ। जसले गर्दा हैजा फैलिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपालमा डुबान हुने गरी संरचना नबनाउन भारतलाई पत्राचार नेपालमा डुबान हुने गरी सीमा क्षेत्रमा भौतिक संरचना नबनाउन भारतलाई पत्राचार गरिएको छ।
मैले नीतिगत क्षेत्रमा गरेको रूपान्तरण ठूलो ‘डिपार्चर’ हो: रामकुमारी झाँक्री पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत रूपमा आफूले ठूलो रूपान्तरण गरेको बताएकी छन्।
काठमाडौंमा हैजाका बिरामी बढ्दै, १२ जनामा पुष्टि काठमाडौं उपत्यकामा हैजाका बिरामी बढ्दै गएका छन्। सोमबारसम्म १२ जनामा हैजा पुष्टि भएको छ।
नवनियुक्त मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ खुवाएकी हुन्।
अमेरिकामा ५० वर्ष लामो गर्भपतनको अधिकार खोसियो अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन वैध हुने पाँच दशक पुरानो फैसला उल्टाइदिएको छ। यस फैसलासँगै गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार खोसिएको छ।
देशभर फैलियो मनसुनी वायु‚ आज यी प्रदेशमा भीषण वर्षाको सम्भावना मनसुनी वायु देशभर फैलिएकाले आज अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ।
इलाममा आइतबार बोलेरो दुर्घटना हुँदा तीन यात्रुको मृत्यु भएको छ।
लामो समयदेखि पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान महत्त्वपूर्ण मानिएको एक प्रसारण लाइनको दुई वटा टावर निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटेको छ।
चार करोड खर्च गरेर निर्माण गरिएको शपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्क उद्घाटन भएको चार महीनामै भासिएको छ।
गाडी भाडा घट्यो, कुन रूटमा कति? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको छ।
केही ठाउँमा भीषण वर्षाको सम्भावना‚ लुम्ले र जुमलेटीमा सतर्कता अपनाउन आग्रह मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने र केही प्रदेशमा भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ।
निगमले घटायो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य सरकारको निर्देशनसँगै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ।
पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ घट्यो सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ।
यी हुन् आगामी तीन दिन बाढी आउने नौ नदी मनसुनी वायुको प्रभावले वर्षासँगै आगामी तीन दिन देशका मुख्य नौ नदीमा बाढी आउने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
माधव नेपालले मन्त्रीहरूलाई भने- पार्टीको निर्णय आफैं कार्यान्वयन गर्नुहोस् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफ्ना मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
फेरि प्रधानमन्त्री हुने सङ्केत गर्दै दाहालले भने- पहिलो चोटि त झिलिमिलीमै गयो नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा झिलिमिलीमै नौ महीना सकिएको बताउँदै अर्को पटक केही काम गरेर देखाउने जिकिर गरेका छन्।